‘मसँग विद्या होइन, पीडाको डिग्री छ’ – सांसद उमा वादी — JagaranMedia.Com
‘मसँग विद्या होइन, पीडाको डिग्री छ’ – सांसद उमा वादी
शान्ति तामाङ प्रकाशित : २०७४/१०/९ गते
एक समय थियो, वादी समुदायलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ का रूपमा हेरिन्थ्यो।
समाजले भिराइदिएको यही ‘दोस्रो दर्जा’ बाट पहिचान बदल्दै ‘माननीय’ बनेकी छन्, उमाकुमारी वादी। उनी कैलालीबाट नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद बनेकी छन्। ‘धेरैले अहिल्यै ‘माननीय’ भन्न थालिसक्नुभयो,’ उमाले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘म लामो संघर्षपछि यहाँसम्म आइपुगेको हुँ।’ उमाको संघर्ष वादी समुदायको निम्ति साझा हो।
(निर्वाचन आयोगमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि उमाकुमारी वादी। तस्बिर : नारायण महर्जन/सेतोपाटी)
उनीहरू राजपरिवारकहाँ हुने उत्सव र चाडबाडमा नाचगान गर्थे। त्यसबापत जग्गा–जमिन, घर र नगद–जिन्सी ‘बक्सिस’ पाउँथे। जीविकोपार्जन यतिले मात्र धानिन्थेन। कतिपय महिला देह व्यापार गर्थे। युवा पुरुष मादल बजाउँथे। उमेर बढ्दै गएपछि तबला, ढोल र मुरली बजाउँथे। त्यसपछि फिरन्ते जीवन सुरु हुन्थ्यो।
‘हामी दुवैलाई समुदायले बहिष्कार गर्यो। गाउँ निकाला गर्यो,’ उमाले भनिन्, ‘घर जान मनाही भयो। पुलिस-प्रशासनले दुःख दियो। हामीले एकअर्काको साथ भने छाडेनौं। बरु उहाँले मेरो आन्दोलनमा सहयोग गर्नुभयो। त्यसैले म यो अवस्थासम्म आइपुगेको छु।’
उमाले ०६४ सालको ४८ दिने वादी आन्दोलनमा अगुवा भएर काम गरेकी थिइन्। तेइस जिल्लाका वादी अगुवाले २६ बुँदे माग लिएर गाउँदेखि केन्द्रसम्म गरेको यात्रा उनले नेतृत्व गरेकी थिइन्। आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, स्थायी बसोबास, यौन पेसा अन्त्य, निःशुल्क शिक्षा, छुवाछुत अन्त्य लगायत उनीहरूका माग थिए।
(उमाकुमारी वादी, ५ भदौ २०६४ मा सिंहदरबारको गेटमा। तस्बिर साभार : एसियन समाचार डटकम )
‘मसँग विद्या होइन, पीडाको डिग्री छ,’ उमा भन्छिन्।
(तस्बिर : नारायण महर्जन/सेतोपाटी)
उनी यस्ता पीडाको फेहरिस्तै सुनाउँछिन्। मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा उनको पालो कहिल्यै आएन। उनले मन्दिरमा चढाउन लगेका फलफूल र अक्षताले भित्र कहिल्यै प्रवेश पाएन। उनको समुदायका बालबालिकाले स्कुलको कक्षाकोठामा समेत कहिल्यै पहिलो बेन्च पाएनन्। जन्मदर्ता र नागरिकता नभएकाले राम्रो काम पाएनन्।
‘हामी पनि यो देशका नागरिक हौं। हामीले पनि सबै जिम्मेवारी उठाएका छौं। तैपनि हामीलाई नागरिकता किन नदिएको? हामी किन पशुको जीवन बिताइरहेका छौं? यही सम्झेर आन्दोलनको तयारीसाथ राजनीतिमा लागेकी थिएँ,’ उमाले भनिन्।
नेपाल दलित संघको केन्द्रीय सदस्य रहेकी उमाले महिला, दलित र सुदूरपश्चिमका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताएकी छन्। ‘सबै क्षेत्रमा महिलाको ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछु,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर बढाउन लाग्ने छु। सरकारसँग २०६४ सालमा भएको सम्झौता पूरा गर्न प्रयास गर्नेछु।’